Mayelana NATHI - Hebei TUBO Machinery Co., Ltd.
I-Hebei TUBO Machinery Co, Ltd. ikhiqiza i-welded ERW Tube Mill / Pipe Mill, LSAW (JCO) Pipe Mill, Cold Roll Owenza Machine futhi Slitting Line, kanye nezinto ezisizayo ezingaphezulu kwe- Iminyaka engu-15, sithuthukise futhi sakhula ngokuhambisana nezidingo zemakethe eziguqukayo njalo.
Nge-morden design software nangaphezulu kwe- 130 usetha zonke izinhlobo ze-CNC machining Equipments, TUBO Imishini ibilokhu iqhubeka ithuthukisa futhi iqinisa ukwazi kwayo emkhakheni ngesikhathi.
Amakhosi we-TUBO ubuchwepheshe be-Roller Common Use Technology bamuva emhlabeni, i-FF Forming, i-FFX Forming, Eqonde ngqo ku-Square, njll. Ngemuva kokubalwa okucwengisisiwe kosayizi nemiphumela yezicelo zomthengi, singakwazi ukuklama umshini wepayipi / weshubhu osindisa inani lokutshala imali ngokuphelele.
TUBO Imishini iwine inqwaba yemigwaqo yokukhiqiza yasekhaya naphesheya kwezilwandle yamapayipi ashiselwe, imishini ebandayo yokwenza imishini kanye nemigwaqo yokunquma enedumela elihle nekhwalithi. Imishini yethu ithunyelwe ku IChile, iColombia, iMexico, i-Ecuador, iRussia, i-Albania, iTurkey, i-Iraq, i-Iran, iCyprus, iSyria, i-Uganda, i-Angola, i-Ethiopia, iVietnam, iCambodia, iRussia, iKazakhstan, i-Uzbekistan, iKyrgyzstan, iTajikistan njll.
TUBO Imishini ayakhi nje kuphela imishini ye-HIGH QUALITY, kepha futhi inikela ngobuchwepheshe bensizakalo yezobuchwepheshe nangemva kokuthengisa. Okwamanje, ibanga lomkhiqizo lingathobela izidingo nezicelo zabasebenzisi.
TUBO Imishini, njengomlingani wabasebenzisi, ihlinzeka yonke indawo noma ngasiphi isikhathi nganoma isiphi isikhathi ubunjiniyela nokusekelwa kwezobuchwepheshe, ulwazi, imibono kanye nezinsizakalo ezingcono kakhulu. Impumelelo yabasebenzisi bayo iletha impumelelo yeTUBO Machinery.
TUBO Imishini - Dala Inani Labasebenzisi!
I-Ningizimu Melika i-Western Europe i-Asia eseMpumalanga Ephakathi i-Afrika Oceania
Inkampani Yokuhweba Yomkhiqizi
Imikhiqizo: ISIKHATHI ESIDE
Inombolo Yabasebenzi: > 236
Ukuthengiswa Kwonyaka: > IZIGIDI ezingama-25
Unyaka Owakhiwe: 1997
Khipha i-pc: <10%
1. Isevisi yangaphambi kokudayiswa
Onjiniyela be-TUBO MACHINERY bahlaziya izidingo zomsebenzisi ngokucophelela, ukuqinisekisa ukuthi zonke izidingo zingahlangatshezwa ngokufanele.
2. Ukufaka nokufaka
Ukufakwa kwe-Turn-key nokuthunyelwa kwamapayipi aphelele we-tube, imigqa yokunquma, imishini yokwakha roll
Ukuqapha ukufakwa nokuthunyelwa;
Ukuqeqeshelwa ochwepheshe / abasebenzi babasebenzisi ngenkathi bethunyelwa;
Ukusebenza kwesikhathi eside kwesigayo, uma kuceliwe;
3. Ukwesekwa kwangemva kokuthengisa
TUBO MACHINERY anganikeza ngeqoqo lezinsizakalo eziphelele ngemuva kokuthengiswa kumakhasimende. Ngemuva kokufakwa nokuthunyelwa, ukuqeqeshwa okuphelele kwezobuchwepheshe kuzonikezwa opharetha nabasebenzi bokulungisa. Uchwepheshe wensizakalo yangemva kokuthengisa uzogcina irekhodi elinemininingwane yemininingwane yamakhasimende nesimo semishini yekhasimende, futhi enze ukuvuselelwa ngezikhathi ezithile nokulandela ngomkhondo okuvalekile. Uma kunanoma imuphi umbuzo, unjiniyela wethu wesondlo uzophendula ukubonisana kwakho ngocingo ubusuku nemini, anikeze izixazululo zobuchwepheshe ngesineke nangokucophelela, futhi anikeze nemiyalo ku-opharetha noma kubasebenzi besondlo.
4. Ukwesekwa Kwe-Breakdown
Onjiniyela abanamakhono nabanolwazi be-TUBO MACHINERY bakulungele ukubhekana nanoma yiluphi uhlobo lokonakala.
Usizo nezeluleko ezisheshayo ngocingo kanye / noma nge-imeyili;
Insizakalo yobuchwepheshe eyenziwa esizeni seKhasimende, uma kudingeka;
Izimpahla eziphuthumayo zezinto ezisebenza ngomshini nange-elektroniki;
5. Ukulungiswa kanye nokwenza ngcono
I-TUBO MACHINERY inolwazi oluningi ekuthuthukiseni, ekuvuseleleni noma ekuvuseleleni izigayo zamapayipi asebekhulile. Amasistimu wokulawula angaba madethi futhi angathembeki ngemuva kweminyaka emide ensimini. Siyakwazi ukunikela ngezinketho zokulawula ezisuselwa ku-PC, i-PLC ne-CNC. Amasistimu wemishini nokuhambisanayo nawo angazuza ekuvuseleleni noma ekushintsheni, okunikeza umsebenzisi umkhiqizo osezingeni elingcono nokusebenza okuthembeke kakhudlwana emshinini wabo.
Thina, u-Hebei TUBO Machinery Co., Ltd., owakha nokuthekelisa okushubile kweshubhu / ipayipi lokugaya, umshini obandayo wokwenza umshini nomugqa wokunquma, kanye nezinto ezisizayo iminyaka engaphezu kwengu-16, sathuthuka futhi sakhula ngokuhambisana nezidingo zemakethe eziguqukayo njalo .
Ngamaqoqo angaphezu kuka-130 zonke izinhlobo ze-CNC machining equipments, abasebenzi abangaphezu kuka-200, i-Approx. Amamitha skwele angama-45,000 wendawo ephansi, imishini ye-TUBO ibilokhu ithuthuka futhi iqinisa ulwazi lwayo ensimini ngesikhathi. Ukushintsha nokuhambisana nezicelo zayo zamakhasimende, inkampani ibheka amakhasimende ayo njengabalingani abanokwethenjelwa futhi abahle kakhulu.
Imikhiqizo yethu Idlule Izitifiketi Eziningi.
Buka Okuningi Ngathi